Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguΝάσος
Yindlwana encinci kumthi womnquma kumda wePatraikos Gulf nasekuqaleni koLwandle lwase-Ionian, inikezela ngokuzola kunye nokuphumla ngezandi zecicadia kunye namaza olwandle agudileyo kwaye inokudityaniswa ngaphantsi kwemizuzu eyi-10 (13 km). ) ngobuhle kunye nobomi besixeko esihle saseNafpaktos.
Indlu yethu ifumaneka kwisithili saseMakinia (Ag. Polikarpos), elunxwemeni, kwindawo yomnquma apho unokuphumla kwaye ujabulele iiholide zakho ngoxolo, kwindalo !!! Iimitha ezingama-30 kuphela ngasentshona nasempuma ukuya endlwini onokuthi uqubhe elwandle oluneengqalutye kunye neekhilomitha ezi-1 ngasempuma unokufumana unxweme lwesanti yegolide yaseMakinia.
Le ndlu isembindini womthi womnquma, ijikelezwe yimithi emininzi.
Ngaphakathi kwayo kukho ithala leencwadi elityebileyo eliyahlula kwigumbi lokulala elinye. Inegumbi lokulala labantwana, ikhitshi elincinci kodwa elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela kunye neziko. Iifestile ezinkulu zangaphambili, zibonelela ngoqhagamshelwano oluqhubekayo kunye nohlaza olungaphandle kunye nolwandle onokulujonga ngelixa unesidlo kwitafile enkulu yothuthu yokhuni. Yindawo efudumeleyo kuwo onke amaxesha onyaka, ifana nendlwana, ngenxa yendlela yayo elula yokuhombisa, ibonelela ngazo zonke iindawo zolonwabo kunye neendawo zokuphumla kunye nebarbecue yegadi. Eyona asethi yayo yimbono, zombini kwidlelo labucala kunye nolwandle.
Ukwenza ixesha lakho libe mnandi, uya kufumana iincwadi ezininzi zesiGrike kunye nesiNgesi, ukufikelela kwi-intanethi, iitawuli ezintsha zokuhlambela kunye nelinen yokulala, isikhokelo sasimahla sedolophu yaseNafpaktos kunye neemveliso ezimbalwa zasekhaya ukukwamkela !!!
Kumgama wokuhamba (300m) uya kufumana indawo yokumisa ibhasi kunye neendawo zokutyela, ezinye ziku-500m kwaye ezinye kumgama we-1 km.
Ngexesha lokuhlala kwakho siya kukukhokela kuyo nantoni na onokuyidinga !!! Nceda usazise imihla yakho kunye nentwana malunga nawe kwaye uya kuba nexesha elimnandi lokuhlala !!!!
Kukho indawo yabucala eninzi njengoko ingarhangqwa zezinye izindlu ngaphandle kwecala elingasempuma, apho kukho indlu ehlala abantu kangangenyanga ehlotyeni. Kwiindawo ezingqongileyo kukho ezinye izindlu ezingezizo iindawo zokuhlala ezisisigxina kwaye zihlala zihlala ehlotyeni. Ulwandle luphambi kwendlu kwaye luneengqalutye. Umgama oyi-1 km ukuya empuma kukho unxweme olunesanti lwaseMakinia.
Umbuki zindwendwe ngu- Νάσος
Ukuba kukho imfuneko, umtyeleli unokuqhagamshelana nam ukuze asombulule nawuphi na umba. Ngokubanzi, umtyeleli ukhululekile kwaye akayi kuphazanyiswa bubukho bam ngaphandle kokuba ucela umcimbi ongxamisekileyo.
Inombolo yomthetho: 00000410560
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R18037
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Makinia